Muungaab oo mahadcelin ka helay reer Garowe (Sabab & Sawirro) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muungaab oo mahadcelin ka helay reer Garowe (Sabab & Sawirro)
Garowe – Mareeg.com: Maamulka gobolka Nugaal, maamulka degmada Garowe, ganacsato iyo waxgarad reer Garowe ah ayaa bogaadin usoo diray gudoomiyaha gobolka Banaadir, ahna duqa Muqdisho, Xasan Maxamed Xuseen (Muungaab).
Sababta dadkaas reer Garowe ah ugu mahadceliyeen Jen. Muungaab ayaa aheyd inuu ganacasadihii lahaa dib ugu celiyey Hotel weyn oo ku yaalla Isgoyka KM4 ee magaalada Muqdisho.
Munaasabad shalay lagu qabtay magaalada Garoowe ayaa lagu soo dhaweynayey wax qabadka maamulka gobolka Benaadir ee uu ka wado magaalada Muqdisho, wax qabadkaas oo uu ka midyahay burburinta dhismayaasha sharci darrada ah iyo soo celinta hanti la kala haystay oo ah Hotel Ex-Degel.
Dadkii halkaas ka hadlay waxaa kamid ahaa Yuusuf Jaamac Degel islamarkaana ah milkiilaha iska la leh Hotel Ex-Degel oo ku yaallay KM 4 ee magaalada Muqdisho, islamarkaana sanado badan uu heystay nin reer Muqdisho ah.
Yuusuf Jaamac ayaa sheegay in maamulka gobolka Benaadir uu qaaday tallaabo ay caddaaladi ku dheehantahay, islamarkaana ay ku faraxsanyihiin horumarka ka socda magaalada Muqdisho, isagoo ku dhiiri geliyay mas’uuliyiinta maamulka inay sii labo jibaaraan howlaha ay ugu adeegayaan bulshada.
Dhammaan dadkii munaasabaddaas ka hadlay ayaa isku raacay in maamulka gobolka Benaadir uu muujiyey caddaalad iyo horumar, taasoo keenikarta in ay dib isugu soo laabtaan bulsho weyntii Soomaaliyeed ee ku kala carartay dagaaladii ahliga ahaa ee dalka ka dhacay.
22-kii Bishaan June ayaa maamulka gobolka Banaadir waxey dhulka la simeen dhismeyaal sharci darro ah, kuwaasoo laga dhul ay laheyd dowladda hoose ee Mqudisho oo ku yaallay wajiga hore ee hotelkan la heystay, waxaana sidoo kale hotelkaas laga qaaday laga aaday nin waqti dheer heystay oo magaca kale ula baxay.
“Dowladda Hoose Paakinkeedii ka hesho, dadkii dulmanaan hantidooda ha helaano” ayuu yiri Muugaab oo warbaahinta kula hadlay KM4 22-kii bishaan June.
Jawaari oo Jabuuti u tegay ka qeybgalka xuska xorriyadda